Maitiro Ekudzima mafaera uye Dhata kubva kuICloud kuenda Kumahara kumusoro Nzvimbo | IPhone nhau
Maitiro Ekudzima maFaira uye Dhata kubva kuICloud kuenda Kunzvimbo Yakasununguka
Nezuro takatsanangura mabviro atingaita nzvimbo kubva paMail application kuitira kuti kuchengetedza iDevice yedu kuwedzereYakanga iri maitiro akareruka, taizodzima iyo account (uye nekudaro cache) uyezve wobva wawedzera iyo account zvakare kuti ugone kugamuchira iyo email. Nhasi tinoshandura nyaya toenda kuICloud, gore raApple, iro rine nzvimbo yemahara yekuchengetera inogumira kune mashanu magigabytes. Kuti tisunungure iCloud nzvimbo tinokwanisa kudzima mafaera nedata isu zvatisingashandise kugona kuisa mamwe mafaera mune iyo Big Apple gore. Mushure mekusvetuka tinotsanangura nzira.
Kubvisa mafaera uye data kubva kuICloud kusunungura nzvimbo
Sezvandanga ndichikuudza, chinangwa cheiyi dzidziso ndechekusunungura iCloud nzvimbo. Kune izvi isu tinodzima mafaera uye data ratisingashandise nenzira inotevera:
Pinda iyo iOS Zvirongwa
Dhinda pa «iCloud», uko tichava neese Apple Cloud Zvirongwa
Mukati meiyo menyu tinodzvanya pairi "Kuchengeta uye makopi"
Dzvanya pa "Manage Kuchengeta"
Paunenge uchinge uri mukati meiyi menyu, tinya pa "Zvinyorwa uye Dhata" uye tinya pane chishandiso icho chatinoda kudzima mafaera uye data
Pamusoro, tinya pa "Hora" uye wozotsvedza kurudyi kudzima faira ratisingade kushandisa
Kana tikadzika kuzasi tinogona kuona bhatani: «Bvisa zvese», kana tikabaya pane iri bhatani, Tinogona kudzima mafaera ese uye data zvine chekuita nechishandiso uye tinotora nzvimbo muApple gore, iCloud.
Nezvo, zvatinoita kudzima mafaera atisingashandise mukati mekushandisa kwega kwega, kwaigara nzvimbo muICloud. Iyo yakawanda mafaera / dhata yatinobvisa kubva kumaapp, iyo yakawanda nzvimbo yatichava nayo muICloud kana vakaisa mafaera kuApple gore.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » ICloud » Maitiro Ekudzima maFaira uye Dhata kubva kuICloud kuenda Kunzvimbo Yakasununguka
Hector Cabrera akadaro
Ini handina kukwanisa kudzima data reapp kuti ini handina kana pane yangu iphone kunyangwe ndichiita izvo zvinotsanangurwa. Pa ios 8.1
Pindura Héctor Cabrera
Francisco Sosa akadaro
Ndanga ndichiedza kudzima zvinhu kubva ku icloud kwemaawa maviri, izvo zvinonditumira iwo iwo unogumbusa meseji weinenge izere nzvimbo uye ini ndinongowana ivo kuti vagare vachinditumira kundotenga imwe nzvimbo, ichi chakachena shitware, handiti? Izvo hazvikuregedze iwe kuti uite chero chinhu kunze kwekutenga, kuyananisa uye iyo bullshit yavanofarira asi huya, bvisa vhidhiyo kana kuteedzera iyo kuPc yangu izvo zvinofanirwa kunge zvisingaite.
Pindura Francisco Sosa
Ndiri kuzoedza kuona zvinoitika kwandiri
Jose Gabriel Roman Madrigal akadaro
Dambudziko randiinaro rakareruka: mune yekuchengetera mukati mune anopfuura mazana mashanu mafaera ane mafoto asingandifarire uye kuti ini handina nzira yekudzima kana kubvisa, mukuwedzera, zvinoita kuti kubata kwemifananidzo kuve kwakaomarara. Zvandiri kutsvaga ndizvo zvandaigara ndichiita mushanduro dzakapfuura, kuti ndikwanise kurodha pasi mafoto uye mune yekuchengetera kwemukati chete iwo mafoto andakatora nguva pfupi yadarika.
Ini ndinodzima sei mafaera aya uye kunyanya ndinoita sei kuti ndivadzivirire kuitazve kuumbika?
Pindura kuna Jose Gabriel Roman Madrigal
sandra ferrera akadaro
Ini handioni iwo sarudzo magwaro uye data, ndoda Hedha
Pindura kuna sandra ferreira
Jorge Leon akadaro
iyi ndeyeios yekare, iyo nyowani inongokutendera iwe kuti utenge nzvimbo, iri bhizinesi reapuro rakachena
Lourdes alvarez chinobata mufananidzo akadaro
Maitiro ekudzima mitambo isingagare uye inotora nzvimbo mukati megore uye ini handikwanise kugadzirisa mbira yangu
Pindura Lourdes Alvarez
Apple kuvhura yayo hombe Apple Store pasi rose muDubai
Xiaomi anotora kopi yeIOS kune imwe nhanho